तपाइँको सामग्री मार्केटि Difलाई फरक पार्ने 12 विचारहरू Martech Zone
आइतवार, नोभेम्बर 22, 2015 शनिबार, फेब्रुअरी ०१, २०२० Douglas Karr
मलाई यो तथ्य मनपर्दछ कि हाम्रा पाठकहरू हामीसँग टाँसिरहन्छन् यद्यपि हामी अत्यधिक रचनात्मक नभए पनि। एक टन इन्फोग्राफिक्स क्युरेट गर्दै र प्रकाशनले अरूलाई हाम्रो प्रकाशनमा भिन्नता राख्न मद्दत गर्दछ - तर हामी त्यो भन्दा टाढा गएको छैनौं। हाम्रो मार्केटिंग नेताहरूको साथ पोडकास्ट साक्षात्कार श्रृंखला एउटा प्रयास हो।
धेरै जसो हामी संक्षिप्त शाब्दिक सामग्रीमा अडिग रहन्छौं कार्यकुशल दृष्टिकोणबाट। हामीसँग धेरै टन स्रोतहरू लेख्न विषयहरू छन्। ओराकलबाट आएको इन्फोग्राफिकले मलाई थप सर्जनशील हुनको लागि प्रेरित गरिरहेको छ। इन्फोग्राफिक, १२ अद्भुत सामग्री मार्केटिंग विचारहरू (जुन ब्लग पोष्टहरू होइनन्), तपाईंको सामग्रीलाई भिन्न बनाउनका लागि केही उत्कृष्ट सुझावहरू प्रदान गर्दछ।
क्विज - क्विजको रूपमा तपाइँको सामग्री लेख्नुहोस्।
twitter - ट्वीटरमा भागहरूमा सामग्री जारी गर्नुहोस्।
चार्ट - तपाईंको सामग्री अनौंठो चार्टको साथ भिन्न गर्नुहोस्।
मामला अध्ययन - ग्राहकलाई स्पटलाइट गर्नुहोस् र केस स्टडी साझा गर्नुहोस्।
हास्य पट्टी - सजिलै सेयर गर्न योग्य सामग्री पट्टीमा तपाईंको सामग्री लेख्नुहोस्।
पाठ सन्देश - SMS मार्फत सर्वेक्षण सोध्नुहोस् र नतीजा साझा गर्नुहोस्।
शृंखला - मान्छे फिर्ता आउन एक बहु-भाग श्रृंखला लेख्नुहोस्।
शेयर - क्युरेट गर्नुहोस् र सामाजिक सामग्री साइटमा सामग्री साझा गर्नुहोस् Pinterest.
साक्षात्कार - एक अन्तर्वार्ता ढाँचा प्रयोग र विशेषज्ञहरु बाट प्रतिक्रिया साझा ..
असामान्य - पाठकहरूलाई संलग्न गराउन विभिन्न शैलीहरू, माउसओभरहरू, र अन्तर्क्रियात्मक ढाँचाहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
शब्दावली - एक गाईड वा शब्दकोष लेख्नुहोस् (र यसलाई अप टु डेटमा राख्नुहोस्!)।
हामी पनि अडियो, भिडियो, पूर्वावलोकन रिपोर्टहरू र सेतो कागजातहरू, र - निश्चित रूपमा - इन्फोग्राफिक्स साझा गर्न मनपराउँदछौं। अरू कुन सामग्री मार्केटि ideas विचारहरू प्रयोग गर्नुभयो जुन राम्रोसँग चलेको छ? टिप्पणी गर्न र साझेदारी गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्!
टैग: case studiesचार्टहास्य स्ट्रिप्ससामग्री विचारहरुसामग्री मार्केटिंग विचारहरूसामग्री श्रृंखलासामग्री सल्लाहशब्दावलीडोऱ्याउनसाक्षात्कारPinterestप्रतियोगिताश्रृंखलाशेयरपाठ सन्देशहरूtwitterअसामान्य